June 2016 - iftineducation.com
iftineducation.com – xalaadda labaad siigada la fasaxayo waa tee? xaaladdan waxay ku xiran tahay caafimaadka ninkii shahwada ay jirkiisa ku badto oo guur aan awoodin oo biyaha badnaantooda dartooda xiniinyaha ay la xunuunaan ama bararaan taas waxay keeni kartaa xanuun badan oo qofka haddii biyaha uuna iska bixinin ay u keeni karto xanuun aad u daran, marka uu siigayso waxaa ka…
iftineducation.com – goorma ayay siigada xaalaal tahay? culimada siigada banneeyay waxay shardi ka dhigeen siigada marka ay noqonayso mid bannaan in ninka uu kacsi daran u yimaado oo guskiisa dami waayo, marka sidaas iyadoo ah ay naag agtiisa u soo dhowaato oo ay suurta gal tahay inuu ku dhaco ama galmo sino ah la sameeyo, culimada waxay dhaheen xiligan siigada qofka…
iftineducation.com – Ciqaabta lagala kulmo zinada guud ahaan? Sinada waxay ka mid tahay dambiyada waaweyn saan horay u soo sheegnay, waxaa lagala kulmayaa naarta Alle, qofka sina ku dhaco waxaa laga rabaa inuu towbad rasmi ah keeno oo dhab ah, waa inuusan u laabanin sinada mar labaad. Sidee looga fogaan karaa sinada? Wax kasta marka laga fogaado wadada loo marayo waa…
iftineducation.com – Galmada dersika xaaskiisa miyay dembigeeda sinada ka weyn tahay? xadiis ayaa wuxuu tilmaamay inay tahay sinada ugu daran dembi ahaan ruuxa inuu la sinaysto xaaska deriskiisa , waayo deriska wuxuu shabahaa qaraabada sidaa awgeed waa in la dhowraa xurmadooda, waa inaan lagu xadgudbin gabdhaooda dadkooda, sidoo kale deriska way fududhay qofka inuu ku dhaco, marka waxaa la xirayaa waddada…
Sinada miyay kala daran tahay dembi ahaan?
iftineducation.com – Sinada miayay kala daran tahay dembi ahaan? jawaabta waa ah, sinada ugu daran waa midda qaraabada sida hooyada ama habaryarta ama eedada ama walaasha , sinada noocan ah kama dhacdo bulshada soomaaliya, laakin bulshada qaar ayay ka dhacdaa, waxay ka mid tahay sinada midda ugu dambiga daran, nin hooyadii fuulaya waa falka ugu dambiga weyn sina ahaan, qofka noocaas…
iftineducation.com – Sinada ugu dembiga weyn waa tee Sinada ugu dembiga weyn waa tee , Sinada waxay ka mid tahay dembiyada ugu waaweyn oo diinta islaamka iyo diimihii ka horreeyay ay si toos u xarrimeen, diinta islaamka waa diinta lagu khatimay diimaha hore, sinada waa xaaran oo go’an oon shaki ku jirin, sinada waa in la galiyo geedka ninka madaxiisa farji…
iftineducation.com – Sheeko Ooyin kaa keeni doonta waa qiso gabadhan qabsatay Cidna lamay hadlayn oo afkaa juuqda gabay waxay ahayd indho iyo jidh nafi ku jirto oo dhaqdhaqaaq samaynaya laakiin aan bixinayn wax jawaab ah baska waxa ka dhex socday kaftan iyo sheekooyin laakiin iyadu intaas midna kumay darsan hal kalmad ah, mid ka mid ah dhalinyaradii ayaa isku dayay inuu…
iftineducation.com – Raga Sameeya Sidan oo kale, Dumarku kama Helaan Ee… Qof kasta bini aadam ah Allah wuxuu siiyay maskax uu kula doorto waxa isaga dan u ah iyo waxa aan danta ugu jirin, mudooyinkii dambe waxaa soo if baxay in dumarka ay ka taxadar badan yihiin ragga kadib markii ay kumanaan dumar ah si aan kala fiirsasho laheen uguur sadeen…
iftineducation.com – Dumarka shuunkooda badan yahay oo la ogaaday in Marka Ay ….. Bilcaamha labo nooc ayay u kala baxaan, bilcaan shuun badan leh iyo bilcaan shuun xaado ah leh. Naagaha shuunka badan waxaa laga wadaa naagaha jirkooda timo badan leh ee lagama wado naag shuunkeeda mudo xiirin oo ku batay oo soo dheeraaday. Naagaha jirka timaha ku leh shuunkooda wuxuu…